Shiinaha - ALinks
Maqaallada ku saabsan Shiinaha
September 16, 2020 Antika Kumari Shiinaha, fiisada
Intaad dalbanayso fiisaha Shiinaha, waxaa jira qaar ka mid ah tallaabooyinka aad u baahan tahay inaad raacdo. Tan ugu muhiimsan, way ku caawin lahayd haddii aad haysato baasaboor ansax ah oo aad ku dalban karto fiisaha. Waxaa jira foom codsi ah oo aad u baahan tahay
Noocee Gaadiid ah ayaad ka heli kartaa Shiinaha?
Waxaa laga yaabaa 20, 2020 Antika Kumari Shiinaha, soo qaado
Nidaamka gaadiidka ee Shiinaha ayaa soo hagaagay tan iyo 1949. Maanta Shiinaha waxay leedahay shabakad ballaaran oo garoomo diyaaradeed, tareeno, jidad waaweyn, tareennada dhulka hoostiisa mara, dekedo, iyo marin biyoodyo. Kuwaas waxaa ka mid ah, Khadadka tareenka dheereeya, jidadka waaweyn, iyo tareenno fara badan oo cusub ayaa inta badan hagaajiyay nolol maalmeedka dadka deegaanka.
Nidaamka waxbarashada iyo iskuulada Shiinaha
Waxaa laga yaabaa 19, 2020 Antika Kumari Shiinaha, dugsiga
Shiinaha, oo loo yaqaan Jamhuuriyadda Shiinaha, waa waddan ku yaal bariga Aasiya. Shiinaha ayaa ah dalka ugu dadka badan iyo dalka afraad ee ugu weyn. Nidaamka waxbarasho ee dalkani wuxuu sidoo kale ku jiraa mid ka mid ah waddamada ugu sareeya. Jaangooyo
Qiimaha safarka ee Shiinaha
April 21, 2020 Shubham Sharma Shiinaha, safarka
Shiinaha waa dalka ugu dadka badan adduunka kuna yaal bariga Aasiya. Shiinaha waxay leedahay meelo ka mid ah meelaha ugu diirimaadka badan adduunka oo ay tahay in qof walbaa arko noloshiisa hal mar. Imaatinka cuntada aad heli doonto
Ku Riyo Riyooyinkiinna Adoo Kasbanaya Shaqooyinka Shiinaha
April 14, 2020 Shubham Sharma Shiinaha, shaqo
Shiinaha, oo ah dalka ugu dadka badan adduunka sidoo kale waxaa lagu yaqaanaa inuu yahay midka ugu dhaqaalaha badan adduunka. Imaatinka dhaqaalaha Shiinaha, wuu kacaa sanad walba. Waxay kaloo keentaa abuurista fursado shaqo oo badan
Aynu Baadhno Shisheeyaha Shiinaha Waqtigiisa Ugu Fiican
April 2, 2020 Karuna Chandna Shiinaha, safarka
WAQTIGA UGU FIICAN EE SOO BOOQASHADA SHIINA Shiinaha waa meel sanad walba loo safro. Iyadoo aan loo eegin markaad tagto, had iyo jeer waxaa jira meel mudan in la booqdo. Cimilo-caqliyeed, waqtiyada ugu wanaagsan ee booqashada Shiinaha waa gu'ga (Abriil – Maajo) iyo deyrta (Sebtember-Oktoobar), oo inta badan
Shiinaha 05: Caafimaadka, Dhakhaatiirta, Rugaha Caafimaadka, Caafimaadka Maskaxda
November 24, 2019 Demi Shiinaha, caafimaadka
Caymiska Caafimaadka iyo Nidaamka Daryeelka Caafimaadka ee Shiinaha. Sidee ayuu u shaqeeyaa Nidaamka Daryeelka Caafimaadka Shiinaha? Shiinaha ayaa leh daryeel caafimaad oo dawladeed oo bilaash ah kaas oo hoos imanaya qorshaha caymiska bulshada ee waddanka. Nidaamka daryeelka caafimaadku wuxuu bixiyaa caymis asaasi ah inta badan